I-Suite yeGarnet-Indawo yokuhlala eZisebenzelayo, iHebbal - I-Airbnb
I-Suite yeGarnet-Indawo yokuhlala eZisebenzelayo, iHebbal
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguNoel
Le ndawo yokuhlala ye-2BHK ibekwe kumgangatho woku-1 kwindawo yokuhlala ezolileyo. Indawo yokuhlala inekhitshi esebenza ngokupheleleyo.
Indawo yokuhlala ekufutshane nesikhululo seenqwelomoya esitsha, iCantonment kunye neYeshwantpur Railway Station.
Indawo ikwaqhagamshelene kakuhle neendawo ezidumileyo zaseBangalore ezinje ngeMG Road kunye neCommercial Street. IZiko loRhwebo lweHlabathi, iManyata Tech Park, okanye iBrigade Magnum.
Esona sikhululo sikufutshane kukuhamba ngemizuzu emi-5 ukusuka esithubeni. Sinikezela ngezaphulelo ezinkulu zokuhlala ixesha elide
(Inkqubo yokuNgena kuQhagamshelwano | Gqibezela uGutyulo phambi kokuNgena).
Le ndawo yokuhlala iLubutofotofo, ithokomele, ikhululekile ngeefestile ezinkulu ezizalise indlu ngokukhanya kwemini yendalo.
Zininzi iindawo zokutyela kunye neevenkile ezihamba umgama nje okwenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo.
Indawo yokuhlala ikwanekhitshi esebenza ngokupheleleyo egcwele isitovu se-induction, i-oveni ye-microwave, i-cutlery kunye nezitya.
Ukuba ungumntu othanda ukutya ke indlela edumileyo ye-RT Nagar 80 yeenyawo yendlela ihamba nje umgama kwaye indlela ye-BEL ikumgama oziikhilomitha ezi-2 ekunika ukufikelela kwiindidi zemingxuma yamanzi kunye neendawo zokutyela ezidumileyo.
Indawo yokuhlala imalunga nemizuzu engama-45 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemizuzu engama-20 kude nezikhululo zikaloliwe zaseYeshwanthpur kunye neCantonment.
Indawo yokuhlala iza ne:-
* I-40 ye-intshi ye-Flat screen yeTV ene-Amazon Fire Stick-Stream Netflix, i-Amazon Prime, i-Hotstar okanye i-YouTube ngqo ukusuka kwisixhobo sakho ukuya kwi-TV.
* I-air-conditioning - Omabini amagumbi okulala endlwini ane-Air-conditioning.
* UPS Power-up
* I-RO yokucoca amanzi.
* Ikhitshi esebenza ngokupheleleyo eneCutlery, Crockery kunye neZitya-Asinayo inkonzo yokupheka, unga-odola ngokuhambisa ukutya kwasekhaya.
*Impahla-Umatshini wokuvasa (Isicoci siyafumaneka kwi-MRP)
* Ugcino lwezindlu (Limited - Jonga imithetho yeNdlu ngeenkcukacha ezithe vetshe), izinto zangasese, ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe. Siza kubonelela ngezinto ezibalulekileyo zokuZicoca.
* I-Cornflakes, i-Maggie Noodles, umgubo wobisi, ikofu kunye neti ziyafumaneka.
*Singakwazi nokukuthengela isikhenkcisi okanye ikhitshi xa usicela.
* Indawo yokupaka iimoto-Sinendawo yokupaka iimoto ekhuselekileyo kwisakhiwo.
*Sineziqendu zebhayisekile ezifunwayo.
*Singakunika kwakhona utshintshelo ukuya kunye nokusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseBangalore.
1. Kukho i-RT Nagar 80 Feet Road uhambo oluhamba nge-5mins ukusuka kwindawo yokuhlala, eneendawo zokutyela ezidumileyo ezifana ne-Kudla, i-Empire, i-Rahhams njl. njl isampuli.
2. BEL indlela iku 2Kms kude leyo ikunika ukufikelela kwimingxuma embalwa edumileyo yokunkcenkceshela kunye neendawo zokuphumla.
3. Eyona ndawo idumileyo "iHammered Exchange Bar" iku-3Kms nje kude
4. Kukho i-micro brewery ebizwa ngokuba yi-" The Druid Garden"( 4 kms ukusuka esithubeni) ukuba uyabuthanda utywala ungenza iisampulu yotywala babo basekuhlaleni. Ukuba uyathanda ulwakhiwo lwangoku, izinto zabo zangaphakathi kufuneka zibonwe.
5. Ukuba uyathanda ukudanisa kukho ibha yophahla oluphezulu ebizwa ngokuba yi "Gravity" ejongene nechibi laseNagawara (iikhilomitha ezi-4 ukusuka esithubeni), banomculo ogqwesileyo ngeempelaveki kunye nembono entle yechibi elingqongileyo.
6. Esona siselo sincinci saseIndiya "i-BYG Brewski" yimizuzu engama-30 yokuqhuba, le 65,000 yeenyawo zesikwere i-microbrewery ibonelela ngeentlobo zebhiya ezili-16 kwimpompo kwaye kufuneka uzame.
40" HDTV ene-I-Netflix, I-HBO Max, I-Amazon Prime Video
Indawo ibekwe kwigumbi elinesango elinesango kwindawo yokuhlala ezolileyo.
Le flethi iqhagamshelwe ngokuthe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya esitsha ngohola wendlela eyenza ukuba uhambo lwakho lube luhambo olukhawulezayo lwe-30mins ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya.
Izikhululo zikaloliwe zaseYeshwantpur kunye neCantonment zikumgama nje ongama-20 emizuzu yokuqhuba.
Indawo ikwaqhagamshelene kakuhle neendawo ezidumileyo zaseBangalore ezinje ngeMG Road kunye neCommercial Street. (ngebhasi, ooritsho, i-Uber okanye iOla Cab’s)
Ukuba uneshishini eBrigade World Trade Centre, Manyata Tech Park okanye Brigade Magnum yakho nje 15 Mins Drive kude.
Ndihlala kufutshane kwaye ndimane ndifowunela kude xa ufuna ndikuncedise ngayo nantoni na.
Ndingumntu othanda ukuhamba kwaye ndithanda ukutya kwaye ndingathanda ukuphalaza iimbotyi kwii-hang-outs zasekhaya kunye namalungu okutya.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$647